Chii chinonzi kudzinga chinangwa, zvinokonzera, kuti zvinoshanda sei uye muripo | Ehupfumi Zvemari
Kuva nebasa hazvireve kuti haugone kudzingwa chero nguva yegore. Muchokwadi, panongofanirwa kuve nechikonzero uye chiziviso kuitira kuti, munguva pfupi, ubve pakushandirwa kuenda kune asingashandi. Uye imwe yeaya manhamba ndiyo inonzi chinangwa kudzingwa.
Asi,Chii chinonzi chinangwa kudzingwa? Ndezvipi zvikonzero zvinogona kupihwa kuti zviitike? Uye muripo upi wauinawo? Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezverudzi urwu rwekudzingwa unilateral newaunoshandira, saka tichataura nezvazvo.
1 Chii chinonzi kudzinga basa
2 Chii chinokonzera kukonzera kudzingwa basa
3 Iyo inoshanda sei
4 Ndeupi muripo unoburitsa
5 Ko kudzinga chinangwa kunogona kuverengerwa sekusaruramisira here kana kuti zvisina basa?
Chinyorwa 52 cheVashandi 'Statute chinotitaurira nezve Kutsakatika kwechibvumirano nezvikonzero zvine chinangwa, nokudaro kupa simba kumushandirwi wekudzinga mushandi kana akapinda mune chero zvikonzero zvakanyorwa muchinyorwa chino. Uye unilaterally, ndiko kuti, nesarudzo yavo pachavo, pasina mushandi, panguva iyoyo, vachikwanisa kuramba.
Ehezve, iwe unogona kushora kudzingwa kwako, uye uchave mutongi anoona kana zvave zvakakodzera kana, zvinopesana, hazvina basa kana kusarongeka.
Muchidimbu, tinogona kutsanangura kudzinga chinangwa senge mushandirwi paanogona kupotera kuitira kuti adzinge vashandi vari kushandisa zvisizvo kutenda kwavo uye vasingaite basa nemazvo uye zvichibva pane zvakagadzwa muVashandi.
Hapana nguva inofungidzirwa kuti iye mushandirwi achaita mukutenda kwakaipa kumanikidza huwandu hwevashandi, asi chishandiso chaungagone kushandisa zviwanikwa zvevanhu zvaunazvo.
Chii chinokonzera kukonzera kudzingwa basa
Sezvakataurwa muchinyorwa 52 cheET, zvikonzero nei kambani inogona kudzinga mushandi zvine chinangwa ndeizvi:
Nekuda kwekushaya kugona kwemushandi. Kunyangwe izvi zvaizivikanwa kana kuitika mushure mekusaina chibvumirano chebasa.
Kushaikwa kwekuchinjika kune iro basa. Zviripachena, iyo kambani inofanirwa kupa nguva yekugadzirisa kune iro basa; uye kukupa iwe kwese kudzidziswa kwakakodzera kuti udzidze kubata kwako mabasa ebasa. Asi kana zvakadaro zvisingaenderane, mushandirwi anopiwa simba rekumisa hukama hwebasa.
Nezvikonzero zvinoratidzwa muchinyorwa 51.1 cheET. Isu tinotaura nezve hupfumi, musangano, kugadzirwa kana hunyanzvi zvikonzero. Zvese zvinotsanangurwa muchinyorwa, asi zvinoreva pamusoro pese kune shanduko mukambani, kungave nekuti kudonha kwekugadzira, nekuti kune matambudziko ehupfumi, vashoma vashandi vanodiwa, nezvimwe.
Mutengo usina kukwana wechibvumirano. Mune ino kesi, inoreva kusainwa kwechibvumirano chakapihwa mari neHurumende. Chete kana vashandi vakagadzwa nesangano risiri purofiti, uye vane chibvumirano chisingagumi, ndipo panogona kushandiswa chimiro chekudzingwa chinangwa.
Kuti mushandirwi, kana kambani, ishandise chinangwa chekudzingwa kuhukama hwebasa, zvinodikanwa kuti maitiro acho tanga netsamba yakanyorwa yekudzinga.
Inofanirwa kutaura kuti chii chiri chikonzero chinopembedza kudzingwa uku, pamwe nezvakakodzera magwaro emushandi kuitira kuti aongorore mashandiro ekambani.
Pamusoro pekudzingwa, mushandi achagamuchira muripo unoenderana nenguva yakashandiswa pabasa.
Kana mushandi asingabvumirane nesarudzo iyi, anogona kusaina chiziviso chekumiswa ne "chisingateereri" uye otarisa zuva Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, une mazuva makumi maviri ebhizinesi ekuti ubvunze kuburikidza nemufananidzo wekuyananisa.
Tsamba yekudzingwa iyi inofanirwa kuendeswa kuhofisi yebasa, iyo SEPE, sezvo iri rimwe remapepa avachakumbira kugadzirisa kubatsirwa kwekushaikwa kwemabasa, kana ivo vaine kodzero yekuwana. Zvino, kana mushandi asina kunakidzwa nezororo, mazuva akamirira, nezvimwe. uchafanirwa kumirira mazuva iwayo kuti abhadharwe (uye kuti mushandirwi avatorere quote) kunyorera kushaya basa.
Kubviswa kwechinangwa hakuitwe nekukasira, asi panofanirwa kunge paine chiziviso chemazuva gumi nemashanu, nguva iyo mushandi iyeye ane maawa matanhatu ezororo rakabhadharwa pavhiki kuti agare navo mukutsvaga basa idzva. Ndokunge, kana chikonzero chave nekuziviswa, mushandi acharamba achishanda mamwe mazuva gumi nemashanu, asi maawa matanhatu pasvondo haafanire kuenda kubasa, kunyangwe hazvo vachizobhadhariswa, nekuti iwo maawa anoshandiswa kutsvaga basa idzva.
Ndeupi muripo unoburitsa
Kudzingwa kwese kwakanangana nekodzero kuripwa. Zvino, isu tinogona kuwana maviri akasiyana fungidziro.
Kazhinji, uye zvakatemerwa kuti kudzingwa kwacho kuve kwakakodzera, ndiko kuti, kuti mutemo waiteererwa, mushandi achave nekodzero kugamuchira mazuva makumi maviri emubhadharo pagore wakashanda. Ehe, pane yakakwira ye12 pamwedzi kubhadhara.
Kana mushandi akataura uye kudzinga chinangwa kuchionekwa sekusagamuchirwa, ipapo dzimwe nzira mbiri dzinopihwa mushandirwi: kana kudzorera mushandi zvakare, kumubhadharira mubairo waasina kutambira kubva panguva yaakadzingwa; kana kubhadhara muripo, izvo mune ino kesi hazvizove mazuva makumi maviri pagore anoshanda, asi mazuva makumi mana nemakumi matatu nematatu pagore anoshanda.
Ko kudzinga chinangwa kunogona kuverengerwa sekusaruramisira here kana kuti zvisina basa?
Chokwadi ndechekuti hongu. Uye zvikonzero zvikuru nei zvichigona kuitika, izvo zvakare zvakajairika, ndezvekuti kambani pachayo, mukuzivisa kwekudzingwa, haisimbise kuti ndezvipi zvikonzero zvekudzingwa. Kana izvozvo zvikaitika, mushandi ane kodzero yekusabvumirana nesarudzo uye nekutaura mamiriro acho kuitira kuti wechitatu akwanise kuongorora mamiriro acho ezvinhu uye uone kana kambani inopa zvese zvinodiwa mapepa ekuti kudzingwa kwacho kuve kunoshanda.
Zvikasadaro, mushandi aigamuchira muripo (kana kudzokera kubasa kwake).
Pakati pemhando dzekudzingwa, chinangwa chekudzingwa chingangove chimwe chezvisinganyanyo zivikanwa, asi chiripo, uye makambani mazhinji, paanoona kuti haakwanise kuenderera nemamiriro ezvinhu, anoshandisa iwo kumisa hukama hwebasa. Maimuziva here? Wakambozviona here muhukama hwako hwebasa? Tiudze nezvenyaya yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Chii chinonzi kudzinga basa